Ukubalwa izitebhisi iqonde ubukhulu string
Ukubalwa izitebhisi entsanjeni
The Ububanzi izitebhisi Z
Inani izinyathelo C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
The ukushuba of izinyathelo W
The ukushuba of the bowstring T
Ibala ubukhulu izitebhisi ngokhuni withs
Cacisa izilinganiso edingekayo ngamamilimitha
X - wokugibela ubude ukuvulwa
Z - The Ububanzi izitebhisi
C - Inani izinyathelo
W - The ukushuba of izinyathelo
T - ukushuba string noma kosoura
LR - isiqondiso isitebhisi lift
SP - isikhundla esigabeni sokuqala kuya ezingeni phansi esitezi sesibili
Ukubalwa design ezitebhisini kusebenziseka kalula lokhuni olukulesi string.
Ukunquma inani izinto.
The izilinganiso ngqo yonke imininingwane.
Imidwebo okuningiliziwe kanye imidvwebo tonkhe tincenye isitebhisi.
ImiKhombandlela kalula izitebhisi.
Isitebhisi Comfortable sifana formula: 2 Isinyathelo ukuphakama + ukujula level = 63±3 bheka.